FAALLO: Geeri ka la GOBSAN! – Balcad.com Teyteyleey
FAALLO: Geeri ka la GOBSAN!
Falka uu ku dhintay wasiir Siraaj, Eebbe ha u raxmado, ugub ma ahan, marka waxba yaan baroorta lagu boodin.
Qofka Xamar ku nool ama dhawaanahan tagay, wuu ogyahay dhaqanxumada askarta saaran gawaarida ay wataan madax ku sheegga magaalada Muqdisho sida waallidu ku jirto u dhexmara!
Anigan saddax mar, ayaa gaari Don’t let some commercial system rob you, when you buy your Ophthacare. We’ve got the lowest prices on the market and we offer Ophthacare only for 48.35 USD! aan sarnaa xabbado afgelis ah na lagu rasaayey.
Middii iigu darneed waxay i qabsatay maalinta aan ka soo laabanayey habeenkii ka horreeyey.
Baabuur aan wadaannay, ayaa wuxuu jidka u banneeyey, oo seed siiyey, in uu na dhaafo gaari qooqan ah, oo askari ay ka laalaadday.
Waa fiid maqrib iyo cisho inta u dhaxaysa. Waxaan maraynaa Istaadiyo Koonis agteeda. Karaan.
Gaarigii markii aan jidka siinnayey, ayey haddana askartii ka laallaadday labadiisa dhinac noo tilmaameen, in aan ka harno. Xaggeen uga harnaa? MAGAG!
Darawalkii ayaa xoogaa gaarigii qaboojiyey, mise, waaba kuwan xabbado nagu furay. Nalkii ayaan ka daminnay, mise, ku ma qancine, markan waa kuwa hoos noogu dhigay rasaastii! Markaas ayan darawalkii ku iri, fadlan nimankan naga reeb waalan!
Wiilashu waaba garteen gaariga, oo nin aanan magaciisa hadda xasuusan, balse, masuul ay ku sheegayeen ayaa lahaa!
Intaa ka dib, mid waa hubbanti, haddii marxuumka caawa geeriyooday ahaan MUWAADIN aan WASIIR ahayn intan oo erayo ah, eedotebin, aragxumo iyo ishaarid aafo ah ma dhacdeen! Geeri ka la GOBSAN!
Inta shacab ee ku baxda gacanta askarta waardiyeysa madax ku sheegga iyo gawaarida lagu wado tiro ma lahan, haddana, qof ka hadla ebtaladaa waa yar tahay!
23/04/2017 Eebbe ha u raxmadee Tahliil Jimcaale Hubbane, oo muddo dheer ka mid ahaa shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta, ayaa waxaa jiiray gaari ka mid ahaa gaadiid galbinayey Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ma aragtay dad u barooranaya? Alla yareedaa!
Geerida Tahliil iyo Siraaj maxay is dhaamaan, aan ka ahayn xilka, maadaama ay labaduba shaqaale dawlo ahaayeen?.
Midka hore wuxuu ku baxay gaari galbinayey madaxweynaha Jamhuuriyadda, kan dambana wuxuu u dhintay xabbad uu riday askari waardiye u ah Hanti Dhawrka Qaranka! Saw waalli ma ahan?.
Waxaan arkayaa dad leh, ha la soo qabto masuulka lahaa gaariga, si ugu yaraan xabsi loo geliyo! Hadday saas tahay, saw ma ahan, in Formaajo laga billaabo, oo gaari ilaalinayey uu jiiray muwaadin?.
Mid kale waa hubbanti, in cabsi xooggan ay ku jirto magaalada, oo sabab u ah falal badan oo ka dhaca, haddana, waa ku lammaanan qaybweyni, quursi iyo isqorqor qasaare uun dhaliya!
Xalka iyo talada lagu qabbiri karo falalkan gurracan waa aragti amni, askar edeb leh iyo amar arrimineed loo wada siman yahay. Madax iyo muwaadin.
Waa la MURRUGAY
W/Q: Bashiir M. Xirsi
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay inuu soo gaabinayo safarka uu ku joogo Itoobiya